ပေးတိုင်းမယူ ကျွေးတိုင်းမစားနဲ့၊ ကိုယ့်နေရာ ကိုယ်နေ Smart | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ပေးတိုင်းမယူ ကျွေးတိုင်းမစားနဲ့၊ ကိုယ့်နေရာ ကိုယ်နေ Smart
ပေးတိုင်းမယူ ကျွေးတိုင်းမစားနဲ့၊ ကိုယ့်နေရာ ကိုယ်နေ Smart
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Aug 2, 2011 in Critic, Myanma News | 14 comments
ဒီနေ့အာရ်အက်အေ သတင်းတပုဒ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နေပြည်တော်မှာလုပ်မဲ့ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကို တက်ဖို့သဘောတူကြောင်း စစ်အစိုးရနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အကြံပေးဦးနေဇင်လတ် ဆိုသူကို ကိုးကားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်စုက တကယ်တက်မှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဖိတ်ကြားလွှာကို လက်ခံထား လိုက်တာကို လိုရာဆွဲပြောလားဆိုတာတော့ ကာယကံရှင်များ အသိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ လတ်တလောမှာ ဒေါ်စုနဲ့စစ်အစိုးရတို့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပိုများလာလို့ အပြောင်းအလဲတခုရဲ့ အစလား ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိ ယောင်ယောင်လေး အပြုသဘောဆန်ခြင်းရဲ့ အဆုံးသတ်လား သို့လော သို့လော ဖြစ်ရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးကို တိမ်တောင်သဖွယ် မင်းရေးကြွယ်လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြလေတော့ စည်းမရှိ ကမ်းမရှိ လုပ်ချင်ရာလုပ်တဲ့ အစိုးရအောက်က သတင်းအမှောင်ချ ခံထားရတဲ့တိုင်းပြည်မှာ ဆန်းဆန်းပြားပြား မစဉ်းစားဘဲ ရိုးရိုးလေး တွေးချင်ပါတယ်။
စစ်အစိုးရအဆက်ဆက် လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေကို နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားသူတိုင်း အနည်းနဲ့အများ သိပြီးသားပါ။ အတိုက်အခံများနဲ့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းဆိုတာ အချိန်ဆွဲ၊ သွေးခွဲဖို့ ထက်ပိုတာ မတွေ့ရပါဘူး။ မဆလကစလို့ ဒီနေ့အချိန်အထိ သူတို့သည် နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သတိကြီးစွာထား ရှောင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပြသာနာမရှိ၊ အကြပ်အတည်းများသည် စီးပွားရေးကြောင့်၊ အဖျက်သမားတွေကြောင့်၊ စတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ ကြည့်လိုက်ရင် ဘယ်လောက်တောင် အာဏာကိုဆုပ်ကိုင်ဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားလည်း သိနိုင်ပါတယ်။
အခုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို တခေတ်မှာတယောက် ပေါ်ထွန်းတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်နဲ့ ဆွေးနွေးတာတောင် အဖွဲ့အစည်း နာမည်မတပ်ဘဲ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းအနေနဲ့ သတ်မှတ်ပြီး သေးသိမ်အောင် လုပ်ပြန်ပါပြီ။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများဟာ အရင်ကမရှိခဲ့လို့ ကနဦးအနေနဲ့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းဆိုရင် ထားပါတော့၊ ဦးသန်းရွှေဆက်သား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြည်နဲ့တွေ့ပြီးတာတောင် ဆယ်ခါရှိပြီ။ ဟိုးအရင်ကလည်း ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၊ ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေး၊ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်တို့နဲ့ တစုတဝေးတည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပြီ။ ဒါလည်း သူတို့ဖက်က ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နေဆဲပါပဲ။ သူခိုးတယောက် မခိုးဘဲမနေတာ မဆန်းပေမဲ့ ကိုယ်က ခဏခဏ အခိုးခံနေရရင်တော့ တခုခုမှားနေပါပြီ။
၁၉၈၈ခုနှစ် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကို ကျောင်းသားတွေ ဆန့်ကျင်ကြတော့ တချို့လူတွေက ဆန္ဒ မစောကြပါနဲ့ကွာ၊ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်နဲ့၊ နောက်တော့ ဆွေးနွေးနေပါတယ်၊ အဲဒါပြီးတော့ အခြေခံဥပဒေ၊ နောက်တော့ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း အပြောင်းအလဲများကို စောင့်ကြည့်ပါအုံး၊ အခုနောက်ဆုံးမှာ ရွေးဂေါက်ပွဲ တမျိုးပြီးတမျိုး လိမ်လည်လှည့်ဖျားတယ်။ ယုံနေသေးတဲ့ သူများရှိသလို့ မဟုတ်မှန်းသိပေမဲ့ မိမိအကျိုးစီးပွားအတွက် ရူးချင်ယောင်ဆောင်သူ၊ ပူးပေါင်းအားပေးသူ အချောင်သမားများ ပိုများလာပါတယ်။ ဒါကို သိသိကြီးနဲ့ ကျွေးတိုင်းစားရင် ဖိတ်တိုင်းသွားရင် ကိုယ်သာ ပေါချာကြီးလို့ အများအမြင်ခံရနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဖက်က တစိုက်မက်မက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ တောင်းဆိုနေတာမို့ ဒင်းတို့အရူးလုပ်တာ မခံရဖို့ သင့်တော်မှန်ကန်စွာ တုံ့ပြန်ရပါမယ်။ သူတို့ဖိတ်ရင် တန်းတူညီတူ အဆင့်တူသူများကို အရည်အချင်းရှိသူများ ထဲက စေလွှတ်ပါ။ ဒါဟာတနည်းအားဖြင့် ကိုယ့်အဖွဲ့ဝင်များ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးတာ၊ ပြည်သူလူထု ထောက်ခံသူများနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအမှုထမ်း ဌာနဆိုင်ရာများနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလဲ တန်းတူညီမျှမှု လက်ကိုင်ထားကျင့်သုံးပါ။ တိုင်းအဆင့်ပါတီအကြီးအကဲများကို ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရဲ၊ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့များက ခေါ်ယူစစ်မေးတာ လက်မခံပါနဲ့။ ဒေါ်စုနဲ့ပါတီဗဟိုက နယ်ရုံးများအတွက် စံပြဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အဆင့်လိုက် အရည်အချင်းရှိသူ ယုံကြည်ရသူများကို လိုအပ်တဲ့အခါ တွေ့ဆုံဖို့ တာဝန်များသတ်မှတ်ထားပါ။ ဘာတွေ သတ်မှတ်ပေးရမလဲ ခေါင်းသိပ်မစားပါနဲ့၊ ခေါ်တွေ့သူများကိုယ်တိုင်လည်း ဘာမှတိတိကျကျ ပြောဆိုဆွေးနွေး ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး၊ ကိုယ်ကသွားလည်း နားထောင်ပြန်ရုံရှိတာပါ။
စစ်ဗျူဟာမှာ တိုက်စစ်ကို တိုက်စစ်နဲ့မတုံ့ပြန်ရ၊ ခံစစ်နဲ့တုံပြန်ရမယ်ဆိုတာ ကြားဖူးပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ တချိန်လုံးခံစစ်ဆိုရင်တော့ ကြာလာရင် တိုက်စစ်မဆင်တတ်တော့မှာ စိုးရတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အန်အယ်ဒီဖက်မှ အပြောထက် တန်ပြန်ထိုးစစ်ဆင်တာ မြင်လိုပါတယ်။ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးဆိုတာ အစိုးရနဲ့ အတိုက်ခံ အကြားမှာရော၊ လူထုပါတီနဲ့ ထောက်ခံသူလူထုအကြားမှာပါ လိုအပ်ပါတယ်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များက ဒါကိုသိလို့ တပ်တွင်း စည်းရုံးရေးများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန်လုပ်ပါတယ်။ လက်တွေ့မှာလည်း ပြောသလို လုပ်ပြရမ်းပြတယ်။ တိုင်းပြည်အာဏာယူမယ့် နိုင်ငံကိုခေါင်းဆောင်ပြမယ့် အန်အယ်ဒီကရော ဘာလဲ ဘယ်လိုလဲ၊ စကားပုံတခု ရှိပါတယ်၊ အချိန်နဲ့ဒီရေသည် လူကိုမစောင့်တဲ့…။
နေပြည်တော် စီးပွားရေးဆွေးနွေးပွဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖိတ်မည်
နေပြည်တော်မှာ အစိုးရက အခုလ အတွင်း ကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မက်ခရို (Macro) စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖိတ်ကြားဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ နိုင်ငံရေး အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဒေါက်တာနေဇင်လတ်က RFA ကို ဒီကနေ့ ပြောကြားပါတယ်။
တိုင်ူးပည်ဘ္ပာငြေ အလုံးအရင်း သုံးစြဲကာ တည်ဆောက်ထားသော နေူပည်တော်္ဘမြိႚသစ်မြ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ အဆောက်အအုံကို တြေႚရပုံ။ (Photo: AFP)
“သူ့ကို ပုဂ္ဂိလက အနေနဲ့ ဖိတ်ဖို့ရှိမယ်ဗျာ။ နိုင်ငံ ကောင်းရာကောင်းကျိုး ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အတွက်ကို ပါတီတို့ ပြည်သူတို့ မခွဲခြားဘဲနဲ့ပေါ့နော်၊ အားလုံးကတော့ ပြောရရင်တော့ သန်း ၆ဝ ထဲက ပြည်သူတွေချည်း ပါပဲနော်။ အဲဒါ ဖိတ်ပြီးတော့မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တဖြည်းဖြည်းချင်း မြှင့်တင်သွားဖို့ အစီအစဉ်လေးတော့ ရှိပါတယ်ဗျာ။ တဘက်ကတော့ ကမ်းလှမ်းထားတယ်ပေါ့ဗျာ၊ ကျန်တဲ့တဘက်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော် ထင်ပါတယ်၊ သူလည်း တက်ပါလိမ့်မယ်”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို NLD ပါတီ ကိုယ်စားပြုပြီး ဖိတ်ကြားမှာ မဟုတ်ဘဲ လူပုဂ္ဂိုလ် တဦးချင်းအရ သီးသန့် ဖိတ်ကြားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ တက်လာပြီးနောက်ပိုင်း နေပြည်တော်မှာ တတိယမြောက် ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး၊ မကြာသေးခင်က ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျှော့ချရေးနဲ့ e-Government အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတွေ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ပြည်တွင်းနဲ့ ပြည်ပရောက် မြန်မာပညာရှင်တွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပါဝင်တဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။ အခုကျင်းပမယ့် မက်ခရို (Macro) စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို တခြား တည်ဆဲ နိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေကိုပါ ဖိတ်ကြားဖို့ရှိပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ တက်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြောင်း ဒေါက်တာ နေဇင်လတ်က ပြောပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ နိုင်ငံရေး အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာ နေဇင်လတ်ကို RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်အောင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
အချိန်နဲ့ဒီရေကလူက်ိုမစောင့်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ ဗျ။ ဘာမှ လုပ်စရာမမြင်ဘူးဗျို့။နဲနဲလှုပ် တာနဲ့ အစကပြန်စမှာပဲ။ ပြည်သူတွေကကျေနပ်နေတာပဲ။ဒို့မြန်မာများက ရှေ့ဆုံးသာ ထိုင်ခိုင်းကြည့် ဘာလာလာ
လက်ခုပ်တီးမယ့် သူတွေ ပဲ။လွယ်ပါဘူးဗျာ။စောင့်ပေါ့ မသေမချင်း။
ခံစစ်နဲ.ပဲအမြဲလုပ်နေရင် ဘယ်တော.မှ တိုက်စစ်ဆင်ရဲမှာမဟုတ်တော.ဘူး
အခုတလောတော့ လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးခွင့် ဆိုတာ အတော် သုံးတယ် ..
(ပြောတိုင်း လိုက်လုပ်ပေးမယ်လို့တော့ အာမ မခံဘူး)
ပေးတိုင်းလည်း ယူတာမကောင်းတော့ လိုချင်တာတောင်းတော့လည်း ပေးတာမဟုတ်ပြန်ဘူး
ဖတ်ဖူးတဲ့စာလေးအရ “လိုချင်တာကို ရအောင်လုပ်၊ မလုပ်နိုင်ရင် ရတာလေးနဲ့ ကျေနပ်နေရမယ်”တဲ့
ပေးတာမလိုချင်ရင်တော့ လိုချင်တာရအောင်တောင်းရတော့မှာပဲ၊ လုပ်ရတော့မှာပဲ
ဦးကြောင်ကြီးပြောသလို ပေးတာပဲအမြဲလက်ခံရယူနေတော့ လိုချင်တာမတောင်းတတ်တော့ဘူးပေ့ါ၊ မတောင်းနိုင်တော့ဘူးပေ့ါ
ပေးတာယူ ကျွေးတာစား အသာလေးကြည့်နေတာ ခံစစ်သဘောမျိုးလို့ယူဆမိတယ်
Honesty is best policy ! Whatever they ( Pro- or Anti- ) do, must have transparency!
အခုတလော အမေစု နဲ့အစိုးရဲ့ ဆက်ဆံရေး ကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ပဲ စောင့်ကြည့်နေဖြစ်တယ် ။
တင်းမာမှု တွေ လည်းတွေ့ နေရတုန်းပဲ လေ။
ပြီးတော့….အမေစု ကလည်း လွတ်လာကတည်းက တစ်ချက်ကလေး မနားပဲ…တောက်လျှောက်ကို..
ကြိုးစားနေတာ..။ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအတွက်.. အမေစု လို ကြိုးစား တည်ဆောက်ပေနေမယ့်ခေါင်းဆောင်တွေ များများရှိစေချင်လိုက်တာ….။ ကိုကြောင်ကြီးတွေးသလို… တိုက်စစ်မဆင်တတ်တော့်မှာ စိုးရတယ် ဆိုတာ တကယ် ကို စိုးရိမ်စရာပါ။ ငြိ်မ်းချမ်းစွာ………… ပဲ
နှစ်ပေါင်းများစွာ…ကြိုးစားရပ်တည်.ခဲ့ တာ ဆိုတော့……။အင်း………..။
သူကြီးလည်း ငြုပ်သီးနဲ့ရောပြီး ကြက်သွန်ပါ အထောင်းခံရမှာ ကြိုတင်တွေးကြောက်နေပုံပဲ
“ကိုယ့်ဖက်က တစိုက်မက်မက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ တောင်းဆိုနေတာမို့ ဒင်းတို့အရူးလုပ်တာ မခံရဖို့ သင့်တော်မှန်ကန်စွာ တုံ့ပြန်ရပါမယ်။ သူတို့ဖိတ်ရင် တန်းတူညီတူ အဆင့်တူသူများကို အရည်အချင်းရှိသူများ ထဲက စေလွှတ်ပါ။ ဒါဟာတနည်းအားဖြင့် ကိုယ့်အဖွဲ့ဝင်များ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးတာ၊ ပြည်သူလူထု ထောက်ခံသူများနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်”(အမေစု ကို ခုတုံလုပ်ပြီး စစ်အာဏာရူးတွေလိမ်စားလာတာကြာပါပီ။ဟိုလိမ်ဒီလိမ်လုပ်နေတာကြာပါပီ။တိကျသေချာတဲ့အဖြေထွက်ဖို့ ကိုမျှော်လင့်နေသူတွေပါရှင်)
ဒေါက်တာမောင်မောင်လိုပဲပြောလိုက်တော့မယ် ဆန္ဒမစောကြပါနဲ့….ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျုပ်တို့လည်း မီးစက်နားတဖြေးဖြေးနီးလာနေပါပီ။